Jaakada suufan ee gabadha (Qaabka dhererka dheer) FH20-047
Qaabka Maya. FH20-047
Baaxadda Range: 4-12A
Fabric: Shell: 100% polyester 50D dhar tolmo leh oo daabac leh oo dhan-bireed; Dahaarka jirka / gacmaha: 210T taffeta, Dahaarka Hood: dhogor bakayle been abuur ah; Furitaanka Hood: dhogor bakayle been abuur ah oo la fuqi karo ah; Buuxinta: Xariir u eg waddada oo kale gacanta
Siyaada ah: badhanka hufan, badhanka snap-ka, birta suun dahabka ah, jiinyeer caag ah
Feature: Daabac dhammaan daabacaadda bireed ee dharka qolofta, dhogor bakayle Been ah oo lagu duubay daaqada iyo furitaanka daboolka
Faallooyin: Dhamaan daabacaadda daabacaadda, Suunka dhexda, Duufaanta gacmaha oo aan dabaysha lahayn oo leh 1x1 feeraha fidsan
Jaakada suufan ee gabadha FH-110
Qaabka No.: FH-110 Midabka: Baaxadda Baaxadda Navy: 4-12A Fabric: Shell: 100% polyester daabacan 50D dhar tolmo leh; Dahaarka: 210T taffeta; Buuxinta: Wadada u eg silk-gacmeedka Gacanta Qalab: Dahaadhka laastikada ah, jiinyeer caag ah Faallooyin: Dhammaan daabacaadda
Jaakada suufan ee gabadha (Qaabka dhererka dheer) FH-108
Qaabka No.: FH-108 Midabka: Xajmiga Xajmiga Pink: 4-12A Fabric: Shell: 100% polyester daabacan 50D dhar tolmo wanaagsan leh; Dahaarka jirka / daboolka: dhogorta Bejirog; Dahaarka darafta: 210T taffeta; Hood furitaanka: dhogor dheer oo midab leh oo kala bixi kara; Buuxinta: Xariir u eg waddada gacanta Gacanta Qalabka: Batoonka taabashada, Siibarka Nylon, Mashiinka caaga ah Hadalkiisa: Balanbaalis dhammaan daabacaadda, Kubadda dhogorta leh ee jiinyeer jeebka ku jirta ， Dabool furi kara oo leh jiinyeer naylo
Jaakada suufan ee gabadha (Qaabka dhererka dheer) FH-107
Qaabka No.: FH-107 Midab: Baaxadda Xajmiga Xajmiga: 4-12A Fabric: Shell: 100% polyester 75D dhar tolmo wanaagsan leh; Dahaarka jirka / daboolka: Bejirog dhogorta, Dahaarka Sleeve: 210T taffeta; Hood furitaanka: Midabbo 2 midab dhogor dheer leh; Buuxinta: Wadada sida xarka u eg gacanta Gacanta Qalabka: Badhanka hufan, cajalad laastik ah, jiinyeer caag ah Feature: Qaabka wadnaha oo duuduuban, dhogor dheer oo leh 2 midab oo dabool leh, jeebka dhogorta wadnaha oo lagu xardhay xarago Xusuusin: Sequin daabac, Duufaan gacmo-gashi dabayl wata oo leh 1 × 1 feeraha fidsan
Jaakada suufan ee gabadha (Qaabka dhererka dheer) FH-83A
Qaabka Maya Dahaarka: 210T taffeta; Buuxinta: Wadada u eg sida xariirka oo kale Gacanta Qalabka: Bir-joojiye bir ah, jiinyeer naylon, jiinyeer caag ah Muuqaalka: Daabac daabac daabac leh oo baal dahab ah oo ku yaal dharka qolofta ah, Daloolka gadaasha dambe ee gadaal Feejignaanta: Daabac bireed Dahab ah, Dabool furi kara oo leh jiinyeer naylon
Jaakada suufan ee gabadha FH-58
Qaabka No.: FH-58 Midab: Baaxadda Xajmiga Xajmiga: 4-12A Fabric: Shell: 100% polyester dhar tolmo leh; Dahaarka jirka / gacmo-gacmeedka: Poly tolmo wanaagsan; Dahaarka Hood: Poly tolmo wanaagsan; Buuxinta: Xarka silk-u eg ee gacanta Gacanta Qalabka: Waxyeelada laastikada, Siibbada caaga ah Muuqaalka: Jirka / gacmo-galka: Kabaar qolof ah iyo maro dahaar ah oo aan tollayn tollo Faallo: Dhammaan daabacaadda
Jaakada suufan ee gabadha (Qaabka dhererka dheer) FH20-056
Qaabka No.: FH20-056 Midab: Xaddiga Cabbirka Caddaan: 4-12A Fabric: Shell: 100% polyester daabacay dhar tolmo wanaagsan + poly chiffon dusha sare; Dahaarka jirka / daboolka: Bejirog dhogorta, Dahaarka Sleeve: 210T taffeta; Hood furitaanka: Midabbo 2 midab dhogor dheer leh; Buuxinta: Xariir u eg waddada gacanta Gacanta Qalabka: Xargaha laastikada ah, 'Eyelet', 'badhanka badhanka', badhanka hufan, jiinyeer caag ah 'Feature: dhogor dhaadheer oo leh 2 midab oo dabool leh, 3 lakab oo ah dhar qolof ah oo leh xaraf warqad oo dhan ah, Jeebka jeebka leh ee dhogorta leh : All-over pr ...
Jaakada suuxsan ee gabadha (Qaabka dhererka dhaadheer) FH20-055
Qaabka Maya Dahaarka jirka / daboolka: Bejirog dhogorta, Dahaarka Sleeve: 210T taffeta; Hood furitaanka: dhogor dheer oo midab leh oo kala bixi kara; Buuxinta: Wadada u eg sida xariirka oo kale Gacanta Qalabka: Cajaladda laastikada ah, badhanka Snapka, badhanka hufan, Jiinyeer birta ah Muuqaal: Dhogor dheer oo 2 midab leh sagxad ah, 3 lakab oo dhar qolof ah oo leh xaraf warqad oo dhan ah, Jeeb jeeb leh dhogor -wax ka badan daabacaadda, All-over emb ...
Jaakada suuxsan ee gabadha (Qaabka dhererka dheer) FH20-022
Qaabka No.: FH20-022 Midab: Baaxadda Xajmiga Xajmiga: 4-12A Fabric: Shell: 100% polyester shining dhar tolmo wanaagsan + Sherpa; Dahaarka jirka / gacmaha: 210T taffeta, Dahaarka Hood: dhalaalaya dhar tolmo wanaagsan sida dharka qolofta; Hood furitaanka: dhogor dheer oo midab leh oo kala bixi kara; Buuxinta: Wadada u eg sida xariirta oo kale Gacanta Qalabka: Xargaha laastikada ah, 'Eyelet', 'Transparent button', badhanka Snap, Nylon 'zipper' .
Jaakada suufan ee gabadha FH-17
Qaabka No.: FH-17 Midab: Baaxadda Cabirka Madoow: 4-12A Dharka: Shell: 100% dhar caag leh oo polyester ah; Dahaarka: 210T taffeta; Buuxinta: Xariir u eg sida gacanta oo kale Gacanta Qalabka: Tuubbada tuubada, badhanka Snapka, Siibillada caaga ah Muuqaalka: Go & tolo guddi
Fashion jaakad daabacan oo diiran / FH-43A
Qaabka Maya. FH-43A
Baaxadda Range: 3-7 / 8A
Fabric: Shell: 100% polyester daabacay dhar tolmo wanaagsan + chiffon poly dusha sare; Dahaarka jirka / gacmo-gacmeedka: 210T taffeta, Dahaarka Hood: Pol ilig tolmo leh dhar; Buuxinta: Xariir u eg waddada oo kale gacanta
Qalabka: Xadhigga tuubbada, badhanka Snapka, Cajalad laastik ah, Nibil jiinyeer
Muuqaal: 3 lakab oo ah dhar qolof ah oo leh xaraf xaraf oo dhan ah iyo chiffon dusha sare
Faallooyin: Dhammaan daabacaadda, daabacaadda Dhammaanteed